Indlu entle, evulekileyo ekufutshane ne CBD - I-Airbnb
Indlu entle, evulekileyo ekufutshane ne CBD
Indawo entle yokulala emithathu yekhaya imizuzu yokuhamba ukusuka eLaunceston CBD kunye neDyunivesithi yaseTasmania Stadium. Iibhedi ezintsha zobukhulu benkosi ezinelinen yodidi oluphezulu. Amagumbi okuhlambela amabini ahlukeneyo. Indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato. Indawo yokuhlala eyahlukileyo kunye negumbi lokutyela. I-WIFI, i-Smart TV's, igadi kunye nokufikelela kwi studio. IPortacot iyafumaneka xa uyicela.
Ngokungqongqo akukho kutshaya okanye izilwanyana zasekhaya.
Nceda uqaphele iibhedi zabelwe abantu aba-2 ngebhedi nganye. Amagumbi aseleyo atshixiwe. Ukuba unqwenela ukufikelela kuwo onke amagumbi min 5 iindwendwe kufuneka zibhukishwe.
Ikhaya lethu limalunga nendawo kunye nentuthuzelo kunye neeholo ezibanzi, iisilingi eziphezulu kunye neendawo ezininzi zokuhlala kunye nokuphumla kubandakanya indawo yangaphandle yokugcakamela ilanga kunye negumbi lokutyela elahlukileyo kunye negumbi lokuhlala. Kukwakho nokhetho lwesicwangciso esivulekileyo sekhitshi / indawo yokutyela / indawo yokuhlala evula indawo engaphandle apho unokuncokola, ukupheka, ukufunda okanye ukubukela iTV kwaye uphumle.
Le ndlu isandula ukuhlaziywa ngovelwano kwimbali yayo ka-1907 eqinisekisa ukuba ikhululekile kwaye icocekile kwiindwendwe ezinobutofotofo banamhlanje ngelixa igcina ifa lemveli elihle kunye nemvelaphi yesakhiwo. Ihonjiswe ngelifa lemveli liziva kodwa likwathuthuzelekile engqondweni ngefenitshala ephucukileyo kunye nokwenziwa kuyo yonke indawo.
Amagumbi okulala onke aneengubo zombane zokulawula ezimbini kwibhedi yenkosi nganye ukuze zifumane intuthuzelo eyongezelelekileyo ngeenyanga ezibandayo zaseTasmanian.
Igumbi lokuhlambela eliphambili libandakanya ishawa evaliweyo kunye nebhafu enzulu yokungena kunye nempahla yokuhlamba kubandakanya umatshini omkhulu wokuhlamba umthwalo kunye nesomisi. Igumbi lokuhlambela lesibini liyiplani evulekileyo yokuvumela ukufikelela okukwaziyo kwishawa kunye nendlu yangasese.
Ikhitshi linendawo yokupheka yegesi enkulu kunye ne-oveni ekupheleni kwebhentshi ende yesiqithi eneendawo ezininzi zokugcina ukutya kunye nesitya sokuhlamba izitya, imicrowave kunye nefriji / ifriji.
Kukho i-smart tv yesibini kwindawo yekhitshi enokuthi ilawuleke ngokuxhomekeke kwindawo onqwenela ukuyibukela usuka phi. Itafile entle eyenziwe ngamaplanga ijonge ikhitshi kunye neesofa ezinkulu zesikhumba ze-chesterfield zenza le ndawo ibe yindawo enkulu yokonwabisa.
I-air conditioner ejikelezayo inceda ukugcina indlu ishushu ebusika kwaye ipholile ehlotyeni.
Iindwendwe zendlu zinokufikelela kwi-WIFI yasimahla engenamkhawulo kunye nebar yesandi ye-Samsung onokuthi uyisebenzise ngeBluetooth umculo owukhethileyo okanye i-Smart TV.
Eli khaya lihle kwaye liphangalele libekwe kwindawo eblue chip eLaunceston. Ijikelezwe zizakhiwo ezintle zelifa lemveli kunye nePaki yesiXeko enemithi esele imisiwe kunye neegadi ezilungisiweyo.
Kukho ivenkile enkulu yevenkile kumgama wokuhamba wendlu kunye nevenkile yeziqhamo kunye neveg.
Ecaleni kwekona kukho i-provedore Alps kunye ne-Amici egcina imveliso yasekhaya kubandakanya izonka ezitsha, iitshizi ezintle kunye nenyama enyangisiweyo.
Kwicala ngalinye kukho iicafes ezimnandi kunye neendawo zokutyela ezilungileyo.
Iziko laseLaunceston Aquatic yimizuzu yokuhambahamba ekoneni ethandwa kakhulu ngabantwana.
We have lived in Launceston all of our lives and absolutely love our home town. We have seen it blossom over the past few years with increased guests coming to stay and eat which has just been fabulous.
28 Elphin Road was a big and risky project for us however after a bit of hard work and a few tears we are proud of what we can offer the wonderful guests who choose to stay with us.
Inombolo yomthetho: DA0232/2017